Manchester United oo kula dagaalameysa kooxda Chelsea saxiixa Gonzalo Higuaín – Gool FM
(Man United) 10 Juunyo 2018. Manchester United ayaa diyaar u ah inay kula dagaalanto kooxda Chelsea saxiixa weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Juventus ee Gonzalo Higuain suuqa xagaaga.
Raadinta saxiixa weeraryahan cusub si uu u hogaamiyo weerarka kooxda Chelsea xili ciyaareedka cusub ee soo aadan ayaa noqotay mid iska cad ee muuqata, kadib markii uu Alvaro Morata ku guul dareestay inuu isku muujiyokooxda reer London.
Dhinaca kale maamulka kooxda Juventus ayaa waxay si cad u shaaciyeen in Blues ay xiiseeneyso saxiixa weeraryahanka reer Argantina ee Gonzalo Higuain.
Laakiin jamaahiirta kooxda Chelsea ayaa waxay dhankooda doorbidayaan lasoo saxiixashada Mauro Icardi, halka ay saraakiisa Blues ka sameyn lahaayeen saxiixa Gonzalo Higuain, si uu u hogaamiyo weerarka kooxda xili ciyaareedka soo aadan.
Joshua Kimmich oo fariin u diray Yaya Toure kadib weerarkii uu ku qaaday Pep Guardiola